ထိရောက်သောအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများဖန်တီးရန်အဆင့် ၁၀ ခု | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 27, 2011 ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 19, 2013
အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကိရိယာများ Zoomerang ကဲ့သို့သောအချက်အလက်များသည်ထိထိရောက်ရောက်နှင့်ထိရောက်စွာကောက်ယူရန်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ကောင်းမွန်စွာအတူတကွစုစည်းထားသောအွန်လိုင်းစစ်တမ်းသည်သင်၏စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်လက်တွေ့ကျပြီးရှင်းလင်းသောအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အချိန်ကိုကြိုတင်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်ကြီးမားသောအွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်သင့်အားပိုမိုမြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုနှုန်းများ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဒေတာများကိုရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒီမှာကူညီဖို့အဆင့် ၁၀ ဆင့်ရှိပါတယ် ထိရောက်သောစစ်တမ်းများဖန်တီးပါ, သင်၏စစ်တမ်းများ၏တုံ့ပြန်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပါနှင့် သင်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ.
ရှင်းလင်းစွာသင်၏စစ်တမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသတ်မှတ် - ကောင်းမွန်သောစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများသည်အလွယ်တကူနားလည်နိုင်သောရည်မှန်းချက်များကို ဦး တည်ထားသည်။ သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရှေ့တက်အချိန်ဖြုန်း။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းကစစ်တမ်းသည်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီမှန်ကန်သောမေးခွန်းများမေးရန်နှင့်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များကိုထုတ်ပေးရန်ကူညီသည်။
စစ်တမ်းကိုတို။ အာရုံစူးစိုက်ပါ - အတိုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုသည်တုံ့ပြန်မှုအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရည်မှန်းချက်မျိုးစုံကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သောမာစတာစစ်တမ်းတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခြင်းထက်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ Zoomerang သုတေသန (Gallop နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ) သည်စစ်တမ်းတစ်ခုသည်ပြီးဆုံးရန် ၅ မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းကြာသင့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ၆ - ၁၀ မိနစ်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ၁၁ မိနစ်အကြာတွင်သိသိသာသာစွန့်ခွာထွက်ခွာသွားမှုနှုန်းကိုတွေ့ရသည်။
မေးခွန်းများကိုရိုးရှင်းအောင်ထားပါ - သင်၏မေးခွန်းများကိုသေချာပေါက်သေချာစေရန်နှင့်ဗန်းစကား၊ ဘန်းစကားသို့မဟုတ်အတိုကောက်အသုံးအနှုန်းများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဖြစ်နိုင်သမျှတံခါးပိတ်မေးခွန်းများကိုသုံးပါ - ပိတ်ထားသောအဆုံးသတ်စစ်တမ်းမေးခွန်းများသည်ဖြေဆိုသူများအားရလဒ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်တိကျသောရွေးချယ်မှုများ (ဥပမာ Yes or No) ပေးသည်။ တံခါးပိတ်မေးခွန်းများသည်ဟုတ် / မဟုတ်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးသို့မဟုတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအတာကိုယူနိုင်သည်
စစ်တမ်းကောက်ယူမှုမှတဆင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုတသမတ်တည်းထားပါ - အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေးများသည် variable များစုံကိုတိုင်းတာရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အဆင့်သတ်မှတ်သည့်ချိန်ခွင် (ဥပမာ ၁ မှ ၅ အထိ) ကိုအသုံးပြုရန်သင်ရွေးချယ်ပါကစစ်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်၎င်းကိုတသမတ်တည်းထားပါ အတိုင်းအတာပေါ်ရှိအမှတ်များတူညီသောပမာဏကို သုံး၍ စစ်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမြင့်မားခြင်းနှင့်နိမ့်ကျနေခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်များတသမတ်တည်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်မကိန်းနံပါတ်ကိုသုံးပါ။
ယုတ္တိအမိန့် - သင်၏စစ်တမ်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာစီးကြောင်းသေချာပါစေ။ စစ်တမ်းကောက်ယူသူများအားစစ်တမ်းကောက်ယူရန်စေ့ဆော်ပေးသည့်နိဒါန်းအကျဉ်း (ဥပမာ -“ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပါ။ အောက်ပါတိုတောင်းသောစစ်တမ်းကိုဖြေပါ။ )” ကိုစတင်ပါ။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အခြေပြုမေးခွန်းများမှ စတင်၍ ကျဉ်းမြောင်းသောမေးခွန်းများကိုစတင်ခြင်းသည်ကောင်းလျှင်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များစုဆောင်းပြီးအဆုံးတွင်အထိခိုက်မခံသောမေးခွန်းများမေးပါ။
သင်၏စစ်တမ်းကိုကြိုတင်စစ်ဆေးပါ - မသေချာမရေရာမှုများနှင့်မျှော်လင့်မထားသောမေးခွန်းများရှာဖွေရန်သင်၏စစ်တမ်းကောက်ယူမှုကိုသင်၏ပစ်မှတ်ထားသောပရိသတ်နှင့် / သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့နှင့်ကြိုတင်စစ်ဆေးပါ။
စစ်တမ်းဖိတ်ကြားချက်များကိုပေးပို့သည့်အချိန်ကိုစဉ်းစားပါ - လတ်တလောစာရင်းဇယားများအရအမြင့်ဆုံးဖွင့်လှစ်မှုနှင့်နှုန်းထားများကိုတနင်္လာနေ့၊ သောကြာနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့တို့တွင်ပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနကစစ်တမ်းဖြေကြားမှုအရည်အသွေးသည်သီတင်းပတ်ကုန်ရက်မှစနေ၊
စစ်တမ်းအီးမေးလ်သတိပေးချက်များပေးပို့ပါ - စစ်တမ်းအားလုံးနှင့်မသင့်တော်သော်လည်းယခင်ကမတုန့်ပြန်သူများအားသတိပေးချက်များပေးပို့ခြင်းသည်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းသိသိသာသာမြင့်တက်နိုင်သည်။
မက်လုံးပေးဖို့စဉ်းစားပါ- စစ်တမ်းနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူသူများ၏အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ မက်လုံးပေးခြင်းသည်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်သည်။ လူတွေကသူတို့ရဲ့အချိန်အတွက်တစ်ခုခုရဖို့စိတ်ကူးကိုကြိုက်တယ်။ Zoomerang သုတေသနကထိုမက်လုံးများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပြသခဲ့သည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 50% အားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုနှုန်းထားများမြှင့်တင်ရန်.
စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။aအတွက်စာရင်းသွင်းပါ အခမဲ့ Zoomerang အခြေခံအကောင့်အထက်ပါအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ၊ သင်၏စစ်တမ်းကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ရလဒ်များကိုအချိန်မှန်တွင်ဆန်းစစ်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ လာမည့်ပို့စ်များကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ထားပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုတိုးတက်သောစစ်တမ်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာတွင်ထည့်သွင်းရန်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းများနှင့်အတူပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည်။ ပျော်ရွှင်စွာလေ့လာခြင်း!
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေပါသလား။ ဤအကြံပြုချက်များသည်အထောက်အကူဖြစ်စေသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်အပိုင်းရှိစကားပြောဆိုမှုကိုဆက်သွယ်ပါ။
26:2014 pm မှာနိုဝင်ဘာ 6, 22